केन्द्रीय कारागारभित्र ३० श्ययाको अस्पतालमा सञ्चालन आउने – मुलधार न्युज
Home > समाचार > केन्द्रीय कारागारभित्र ३० श्ययाको अस्पतालमा सञ्चालन आउने
केन्द्रीय कारागारभित्र ३० श्ययाको अस्पतालमा सञ्चालन आउने
२ माघ २०७५, बुधबार ११:१३
काठमाडौँ-नेपालकै सबैभन्दा ठूलो कारागारको रूपमा रहेको केन्द्रीय कारागारमा ३० श्ययाको अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ ।
विसं १९७१ मा स्थापना भएको केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो । सो अस्पतालमा २०२० सालमा एउटा कोठाबाट कैदीबन्दीको स्वास्थ्य जाँच गर्न शुरु गरिएको थियो।
कारागार अस्पतालले २०६८ सालमा छुट्टै भवन निर्माण गरी २०७० साउन २८ देखि १५ श्ययाको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
अस्पतालका शाखा अधिकृत सुनिता घिमिरेका अनुसार कैदीबन्दीलाई सबै रोगको उपचार कारागारभित्रै गर्न श्यया थप गरिएको हो । “दशौँ तहको अधिकृतको नेतृत्वमा ६७ जनाको दरबन्दी रहने गरी अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । तीस श्ययाको अस्पतालमा विभिन्न रोगका सात विशेषज्ञ चिकित्सकले उपचार गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
केन्द्रीय कारागारमा हाल दुई हजार ८०० कैदीबन्दी छन् । केन्द्रीय कारागारभित्र केन्द्र, भद्र र महिला जेल रहेको छ । तीनवटैमा कैदीबन्दी राख्ने क्षमता एक हजार ५०० रहेको छ।
अस्पतालका निमित्त सुपरिटेन्डेण्ट डा भगतलाल श्रेष्ठ कारागार अस्पतालले पुरुष तथा महिला कैदीबन्दीका लागि छुट्टाछुट्टै वाड स्थापना गरेर ओपिडी, ल्याब, एक्सरे, इसिजी, अल्ट्रासाउण्ड, डेन्टल, मनरोग, छालारोग र आँखा रोगको उपचार गरिरहेको बताउनुहुन्छ।
पन्ध्र श्ययाको अस्पताल सञ्चालनमा ३१ दरबन्दी रहेको अस्पतालले ३० श्ययाको अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि ३६ दरबन्दी थप गरेको हो । उक्त अस्पतालमा हाल ५५ चिकित्सकले उपचार गरिरहेका छन् ।
कारागार अस्पतालले अस्पतालभित्र उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई भने अस्पताल बाहिरका सरकारी अस्पतालमा पठाउने गरेको छ । “रोगको प्रकृति हेरेर वीर अस्पताल, त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, मानसिक अस्पताल, गङ्गालाल अस्पताललगायतमा पठाउँदै आएका छौँ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कैदीबन्दीले निजी अस्पतालमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न चाहेमा आफ्नै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । कारागार अस्पतालले भने निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको छ ।
अस्पतालका बिरामीमा अहिले रुघाखोकी, दम, ज्वरो, टाइफाइड एवं विभिन्न किसिमका सरुवा रोग देखापरेको छ । साँघुरो ठाँउ र धेरै कैदीबन्दी राख्दा उक्त रोग बढी देखिएको हो ।
दैनिक ८० देखि १०० बिरामीको उपचार गरिरहेको कारागार अस्पतालमा मङ्सिरमा ४७३ पुरुष र ७२ महिला कैदीबन्दीको उपचार गरिएको छ । आव २०७४÷७५ मा ३२ हजार कैदीबन्दीको उपचार गरिएको थियो ।
केन्द्रीय कारागार अस्पतालका बिरामीबाहेक डिल्लीबजार र नख्खु कारागारका कैदीबन्दीको समेत उक्त अस्पतालले उपचार गर्नुका साथै औषधि वितरण गर्दै आएको छ ।
अस्पताललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि अस्पताल प्रशासनले ११औँ तहको दरबन्दी र चिकित्सक माग गरेको छ । यस्तै, शल्यक्रिया र प्रसूति उपचारको समेत व्यवस्था मिलाउनका लागि माग गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले बिरामी कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चौबीसै घण्टा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बिएण्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन
रौतहटमा प्रहरी र भारतीय आपराधिक समूहबीच गोली हानाहान
वीरेन्द्रनगरमा भोलि बिहान ६ बजेसम्मका लागि ‘कर्फ्यु’
सुर्खेतमा गोली चल्यो
गायिका आस्था राउत धरौटीमा छुटिन्
करोडौं ठग्ने गजमेरको सेटिङ मिलाउने अखडा बन्यो कारागार
नेपाल प्रहरीको सिआईबीलाई ‘एसिया इन्भाइरोमेन्टल इनफोर्समेन्ट अवार्ड’
सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा प्रकाशित (नामसहित)
सशस्त्र प्रहरीका ५४ निरीक्षक र १० सहायक निरीक्षक दीक्षित (तस्वीरसहित)
संविधान दिवसको अवसर सशस्त्र प्रहरीद्धारा वृक्षारोपण
टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रगियोगिता कात्तिक ८ देखि
भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने प्रमुख आयुक्त घिमिरेको दृढ़ता
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सल्लाहकार तथा सहयोगीले बुझाए राजीनामा
टीकापुर घटनाको सुनुवाइ आज, सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ खाने बाटो खुल्ला त?
अफगानिस्तानमा तालिवानको अाक्रमणमा परी ११ नेपाली घाइते
समाचार सुचनामा आधारित तर सूचना अपुरो !
राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले रोजगारीका लागि बौद्धिक बिद्रोह गर्‍यो
अनन्त खतरामुक्त , बाम गठबन्धन
वाइडबडी प्रकरणः वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारलाई कालोमोसो
विद्यार्थी अपहरण गरि हत्या गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
मगर चलचित्र ‘खुर्पेटो’ चितवन र पोखरामा च्यारिटी शो हुने
नेपालबाट पहिलोपल्ट ‘मिस युनिभर्स’मा नग्मा
ड्युटीमा लापरबाही गर्ने तीन प्रहरी कारबाहीमा
एक करोड ७१ लाख हिनामिना गरी लेखा अधिकृत फरार